के हो क्वान्टम कम्प्युटर ? शक्ति राष्ट्र किन यसको पछि लागेका छन् ?
एजेन्सी । आगामी समयमा क्वान्टम कम्प्युटिङले संसार र हाम्रो जीवनलाई प्रभावकारी रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। यो नयाँ प्रविधिको महत्व बुझेर भारत सरकारले गत वर्ष यस प्रविधिको विकासका लागि बजेटमा ८ हजार करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको थियो ।
यसपछि यस वर्षको अगस्टको अन्तिम साता भारत सरकारले क्वान्टम सिमुलेटर क्यूसिम लन्च गर्‍यो, जसको माध्यमबाट वैज्ञानिक र उद्यमीहरूलाई यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न सजिलो बनाइएको थियो।
भारतबाहेक अन्य देशले पनि भविष्यलाई नयाँ दिशा दिन यो प्रविधिमा लगानी गरिरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले सन् २०१८ मा नेशनल क्वान्टम इनिसिएटिभ ऐन लागू गर्‍यो र यसका लागि १.२ बिलियन डलरको व्यवस्था गरेको थियो।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टी क्वान्टम कम्युनिकेसन्सले सन् २०१६ मा १३औं पञ्चवर्षीय योजनामा रणनीतिक रूपमा प्रमुख उद्योगहरू समावेश गरेको थियो ।
बेलायतले सन् २०१३ मा यसका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाएको थियो । २०१६ मा क्यानडाले यस प्रविधिमा ५० मिलियन क्यानेडियन डलर लगानी गर्ने घोषणा गर्‍यो । यसका अलावा जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, रुस, जापान र गुगल, अमेजन, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीले पनि यो प्रविधिमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले यस पटक हामी विश्वमा क्वान्टम कम्प्युटरहरू के हो र यसलाई बनाउन किन देशहरू बीच प्रतिस्पर्धा छ भनेर अनुसन्धान गर्दैछौं।
क्वान्टम कम्प्युटिङ बुझ्नुहोस्, त्यो भन्दा पहिले क्वान्टम के हो बुझौं। यसको चर्चा बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा सुरु भयो। यो त्यही समय थियो जब अल्बर्ट आइन्स्टाइनले संसारलाई ‘थ्योरी अफ रिलेटिभिटी’ दिएका थिए।
अहिलेसम्म भौतिकशास्त्र शास्त्रीय सिद्धान्तमा आधारित थियो, जुन वास्तविकतामा हुने घटनाहरूको व्याख्यासँग सम्बन्धित थियो। यस अनुसार ब्रह्माण्डमा चीजहरूको अस्तित्व र तिनीहरूको परिवर्तन सबै कुरा निश्चित छ।
डा. सोहिनी घोष क्यानडाको विल्फ्रेड लौरियर विश्वविद्यालयमा भौतिक विज्ञान र कम्प्युटर विज्ञानका प्राध्यापक हुन्। उनी भन्छिन्, ‘यस जानकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर तपाईले फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ कि सायद ब्रह्माण्डमा सबै कुरा हामीले विश्वास गरेको जस्तो निर्धारित छैन। हामीले भौतिक विज्ञानका सिद्धान्तहरूमा आधारभूत अनिश्चितता छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ।’
र, यो अनिश्चितता पदार्थको सबैभन्दा सानो कण, परमाणुको अणुको व्यवहारमा निहित छ। क्वान्टम मेकानिक्स यी साना अणुहरूको व्यवहारको अध्ययन हो, जुन भौतिक विज्ञानको शास्त्रीय सिद्धान्तको दायरा भित्र बुझ्न असम्भव छ ।
यस अनिश्चितताको बारेमा वैज्ञानिक निल्स बोहरले भने, ‘हामीले वास्तविक भन्ने हो भने विश्वास गर्ने सबै चीजहरू वास्तविक भन्न नसकिने चीजहरू मिलेर बनेको हुन्छ। सायद यही कारण हुनसक्छ कि आइन्स्टाइनले यसको बारेमा भनेका थिए, यदि यो सत्य हो भने यो विज्ञानको रूपमा भौतिक विज्ञानको अन्त्य हुनेछ।’
डा. घोष भन्छिन्, ‘मैले यसरी बुझ्ने प्रयास गर्छु। एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्– हेड र पुच्छर। सिक्का घुमाएमा टाउको वा पुच्छर आउँछ, सम्भावना ५०-५० प्रतिशत बराबर हुन्छ। भौतिकशास्त्र भन्छ, ‘सिक्का फसाउँदा कुनै पनि समयमा टाउको वा पुच्छर हुन्छ, तर यदि हामीले यसलाई क्वान्टम सिक्काको रूपमा लिने हो भने समयको कुनै पनि बिन्दुमा टाउको वा पुच्छर मात्र हुँदैन। एउटा सिक्का फ्याँकिएको छ, तर यसको पहिचान अनिश्चित छ।’
तपाईं क्वान्टम सिक्का दुई पक्षहरूमा सीमित गर्न सक्नुहुन्न। यसमा सामान्य सिक्काहरू भन्दा धेरै अनिश्चितता छ, त्यो हो, तिनीहरू गैर-बाइनरी हुन्।
उनी भन्छिन्, ‘हामी यसलाई सुपरपोजिसन भन्छौं। अर्थात् सिक्का घुमिरहेको बेला एकै समयमा दुवै पक्ष एकसाथ हुन्छन्। अर्थात्, एक पटकमा एकभन्दा बढी सम्भावनाहरू हुन्छन्। यो हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवभन्दा फरक छ। सजिलो छैन भन्ने बुझिन्छ।’
यस सिद्धान्तमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ कि यो अनिश्चितता अर्थात् गैर-बाइनरी हुनु कुनै चीजको प्रकृति हो। डा. घोष क्वान्टम कम्प्युटरको अवधारणाले नै क्रान्तिकारी बन्ने बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘यो टेक्नोलोजीले भौतिक विज्ञानका पूर्णतया फरक सिद्धान्तहरूमा काम गर्छ। यो कारले तपाईंलाई ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने काम गर्छ, तर यो विज्ञानका विभिन्न सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनेछ।’ अनिश्चितता क्वान्टम संसारमा सबै कुराको प्रकृति हो, र यस्ता मेसिनहरू निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
क्वान्टम कम्प्युटर किन विशेष ?
प्रोफेसर स्टेफनी वेनरले ड्याफ्ट युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा क्वान्टम कम्प्युटिङ केन्द्र चलाउँछिन्। उनी बताउँछिन् कि कसरी क्वान्टम कम्प्युटर सामान्य कम्प्युटर भन्दा राम्रो छ।
उनी भन्छिन्, ‘सामान्य कम्प्युटरले जानकारीलाई शून्य र एकमा प्रशोधन गर्छ। यदि तपाईंले मलाई भिडियो पठाउनुभयो भने, कम्प्युटरले यसलाई शून्य र एक शृङ्खलाका लाखौं टुक्राहरूमा विभाजन गर्छ र मलाई पठाउँछ, र त्यसपछि म यसलाई पुन: निर्माण गर्न सक्छु। तपाईंले पठाउनुभएको भिडियो हेर्नुहोस्। तर क्वान्टम कम्प्युटरमा हामी क्वान्टम बिट्समा काम गर्छौं। यसमा शून्य र एक बाहेक, दुबैसँगै हुन सक्छ।’
‘यो सुपरपोजिसनको कारण हो जुन हामीले केहि समय अघि कुरा गर्यौं। यो कसरी हुन्छ जान्नको लागि, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं भूलभुलैयामा हुनुहुन्छ र बाहिर निस्कन कम्प्युटरको मद्दत लिनुहोस्।’
प्रोफेसर स्टेफनी वेइनर भन्छिन्, ‘यदि तपाइँ बायाँतर्फ जान चाहानुहुन्छ भने तपाइँ कम्प्यूटरलाई तपाइँले बायाँतर्फ बाटो फेला पार्ने सम्भावना कति छ भनेर सोध्नुहुन्छ। एक क्वान्टम बिट शून्य र एक हुन सक्छ वा बायाँ र दायाँ सँगै भन्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ दुबै अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि सम्भावनाहरू। यो त्यति सरल छैन, तर यसले तपाईंलाई बताउँछ कि क्वान्टम कम्प्युटरमा सामान्य कम्प्युटरको तुलनामा केही प्रश्नहरू छन्। उत्तरहरू छिटो फेला पार्न सकिन्छ किनभने क्वान्टम कम्प्युटरले एकै समयमा धेरै सम्भावनाहरूमा काम गर्न सक्छ।’
यस्तो सुपरफास्ट कम्प्युटरले चिकित्सा क्षेत्रमा के योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । के यी नयाँ औषधि बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ?
उनी भन्छिन्, ‘औषधि बनाउन केमिकल प्रयोग गर्न सकिन्छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न प्रयोगशालामा गएर हेर्न सकिन्छ। समय लाग्न सक्ने भएकाले मानिसले अनुसन्धान गर्नुको सट्टा सिमुलेशन गरेर नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्। यसको सही प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन। कि हैन।’
के सामान्य कम्प्युटरले यो गर्न सक्छ ?
प्रोफेसर स्टेफनी वेइनर भन्छिन्, ‘सैद्धान्तिक रूपमा एक सामान्य कम्प्युटरले क्वान्टम कम्प्युटरले गर्न सक्ने सबै काम गर्न सक्छ। प्रश्न यो हो कि यसले कति समय लिन्छ। क्वान्टम कम्प्युटरमा यो केहि घण्टामा हुन्छ, जबकि सामान्य कम्प्युटरमा यसले गर्न सक्छ। तर, जन्मभन्दा धेरै समय लाग्नेछ।’
यसको अर्थ क्वान्टम कम्प्युटरले औषधि अनुसन्धानमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको माग बढ्नुपर्छ तर त्यस्तो छैन ।
प्रोफेसर विन्फ्रेड हेन्सिङर क्वान्टम टेक्नोलोजीका लागि ससेक्स केन्द्रका निर्देशक हुन्। उनी क्वान्टम कम्प्युटरको प्रविधिलाई वास्तविकता बनाउन चाहन्छन्।
उनी भन्छन्, ‘क्वान्टम कम्प्युटरहरू एक हिसाबले विज्ञानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गहिरो रहस्य हो। तिनीहरूसँग अचम्मको सम्भावनाहरू छन् र तिनीहरूले धेरै कुराहरू गर्न सक्छन्। तर तिनीहरूलाई निर्माण गर्नु जत्तिकै गाह्रो चुनौती हो किनभने यसको लागि तपाईंले सुपरपोजिसन जस्ता प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। जुन लगभग असम्भव छ। र यो नगरी तपाईले गणना गर्न सक्नुहुन्न।’
विगत तीन दशकदेखि वैज्ञानिकहरू यसका लागि प्रयासरत छन् तर धेरैजसो यसमा सफल हुन सकेका छैनन् ।
प्रोफेसर हेन्सिन्जर बताउँछन्, ‘दुई प्लेटफर्मको नतिजा सकारात्मक थियो। ती मध्ये एउटा सुपरकन्डक्टिङ सर्किट हो जुन माइक्रोसफ्ट , आईबीएम र गुगलले क्वान्टम कम्प्युटरहरू बनाउन प्रयोग गरिरहेका छन् । यो एक विशेष प्रकारको इलेक्ट्रोनिक सर्किट हो जुन तपाईंले प्रयोग गर्न आवश्यक छ। दुई सय पचास डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रममा चिसो गर्न।’
त्रुटिको मार्जिन बिना क्विट बनाउन सक्ने क्षमता माइक्रोचिपले फ्रिजलाई चिसो गर्न सक्षम छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। र सुपरकन्डक्टिङ सर्किटको समस्या यो हो कि ठूलो फ्रिज बनाउन सजिलो छैन।
प्रोफेसर हेन्सिङगर र उनको टोली यो समस्या समाधान गर्न कोशिस गर्दै छन्। तिनीहरूले माइक्रोस्कोपिक कण आयनहरू ट्र्याप गर्ने बाटो लिइरहेका छन्। आयनहरू कम विद्युतीय चार्ज भएका अणुहरू हुन्।
उनी भन्छन्, ‘यदि आयनहरू छुट्याइएको छ भने तिनीहरू सामान्य तापक्रममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्रविधिमा तपाइँ एक माइक्रोचिप प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले विद्युतीय क्षेत्र सिर्जना गर्दछ। यसकारण चार्ज गरिएको आयनहरू माइक्रोचिपको माथि तैरिन्छन् । प्रत्येक आयनले काम गर्दछ। क्वान्टम बिट, जसमा शून्य र एकको जानकारी भण्डारण गर्न सकिन्छ। त्यस्ता धेरै आयनहरू बनाइन्छ र तिनीहरूद्वारा क्वान्टम कम्प्युटिङ गर्न सकिन्छ।’
यो स्पष्ट छ कि यो प्रविधि चाँडै सामान्य प्रयोगको लागि उपलब्ध छैन। तर यो काम गर्ने मेसिनहरू कस्तो देखिन्छन् ?
प्रोफेसर हेन्सिन्जर भन्छन्, ‘तिनीहरू ठूला छन्, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू विश्वको पहिलो कम्प्युटरहरू भन्दा केही मिटर मात्र सानो छन् जुन भ्याकुम ट्यूब प्रणालीमा आधारित थिए। तिनीहरूमा लेजरहरू, इलेक्ट्रोनिक्स र अप्टिकल प्रणालीहरू छन्। यो विज्ञान कथा हो। जस्तो देखिन्छ। फिल्ममा देखाइएको भविष्यका मेसिनहरू।’
प्रोफेसर हेन्सिन्जर र उनको टोलीले हालसम्म क्वान्टम कम्प्युटरको पाँचवटा प्रोटोटाइपहरू बनाएका छन्। तर औषधि बनाउने जस्ता कामका लागि उनीहरूलाई ठूलो संख्यामा हात चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले ठूलो मात्रामा क्युबिट्स बनाउन खोजिरहेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘क्वान्टम कम्प्युटरको प्रयोगमा यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अहिले विश्वभर निर्माण भइरहेका क्वान्टम कम्प्युटरहरूले कम क्विट बनाउन सक्षम छन्। हामी दश-बीस क्विटहरू बनाउनुको सट्टा हजारौं बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। लाखौं क्युबिट बनाउन।
प्रोफेसर हेन्सिङगर भन्छन्, ‘यो सन् १९४० को दशक जस्तै हो, जब सानातिना कामहरू गर्न ठूला मेसिनहरू थिए, जुन महँगो र चलाउन गाह्रो थियो। समयको साथ, यो प्रविधि सामान्य हुन थाल्यो।’ केही वर्षपछि मानिसले क्लाउडमार्फत क्वान्टम कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्ने उनको विश्वास छ ।
क्वान्टम कम्प्युटरको दौड किन ?
जोनाथन डाओलिङ अमेरिकाको लुइसियाना विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए। उनले लामो समयसम्म क्वान्टम कम्प्युटरको सम्भावनामा काम गरे।
जुन २०२० मा आफ्नो मृत्यु हुनुअघि उनले भनेका थिए, ‘क्वान्टम कम्प्युटर बनाउन देशहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ र यो अन्तरिक्ष दौड जस्तै हो।’
‘यो डाटा सुरक्षित राख्ने दौड हो, व्यक्तिगत डाटा, कम्पनीहरू, सेना र सरकारहरूको डाटा सुरक्षित राख्न। डाटा शक्ति हो र अब देशहरूले महसुस गरिरहेका छन् कि उनीहरू यस मामिलामा जोखिममा पर्न सक्छन्।’
२०१३ मा, अमेरिकी गुप्तचर ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेनले सरकारसँग सम्बन्धित धेरै गुप्तचर कागजातहरू लीक गरे। यी कागजातहरूले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीले अरूको सञ्चार सञ्जालमा कति हदसम्म तोडफोड गर्न सक्छ भन्ने खुलासा गरेको छ।
जोनाथनले भने, ‘एडवर्ड स्नोडेनको चुहावटले चिनियाँहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो कि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी सञ्चार सञ्जाल तोड्ने आफ्नो सोचभन्दा धेरै अगाडि थियो। उनीहरूले अमेरिकीहरूले पहिलो क्वान्टम कम्प्युटर बनाउने चिन्ता पनि व्यक्त गरे।’
यदि यसो भयो भने, अमेरिकाले चीनको गुप्तचर पढ्न सक्षम हुनेछ, तर चीनलाई यसको रहस्य पढ्नबाट रोक्न सक्षम हुनेछ। कसरी ?
उनी बताउँछन्, ‘मानौं बबले एलिसलाई गोप्य सन्देश पठाउन चाहन्छन् र इभले उनीहरूको सञ्चार च्यानलमा प्रवेश गर्न चाहन्छन्। वर्तमानमा, 'सार्वजनिक कुञ्जी' इन्क्रिप्शन प्रविधिहरू सुरक्षित सन्देशहरू पठाउन प्रयोग गरिन्छ। बबले सन्देशलाई लक गर्छ। यसको कुञ्जी लक एलिससँग मात्र छ र उसले यसलाई खोल्न सक्छ। 'सार्वजनिक कुञ्जी' सुरक्षाको अवधारणा भनेको सामान्य कम्प्युटरलाई ह्याक गर्न सयौं वर्ष लाग्छ तर क्वान्टम कम्प्युटरले केही घण्टामै ह्याक गर्न सक्छ।’
यो सुन्दा डर लाग्छ । तर यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । अर्थात्, यदि तपाईंले ‘क्वान्टम कुञ्जी’ प्रयोग गर्नुभयो भने, क्वान्टम कम्प्युटरले पनि यसलाई ह्याक गर्न सक्षम हुनेछैन, र यो सुपरपोजिसनिङका कारण सम्भव हुनेछ।
यदि ‘क्वान्टम की’ ह्याक गर्ने प्रयास गरियो भने, यसमा प्रविष्ट गरिएको जानकारी स्वतः नष्ट हुनेछ र प्रेषकलाई यसको बारेमा थाहा हुनेछ। क्वान्टम कम्प्यूटर मार्फत सञ्चार पूर्णतया सुरक्षित हुनेछ -यो बनाउन को लागी दौड पछि कारण हो। यो प्रविधिमा चीनले ठूलो लगानी गरिरहेको जोनाथन डोलिङले बताए ।
उनले भने, ‘चीनले एउटा नेटवर्क निर्माण गरिरहेको छ जसमा स्याटेलाइट पनि समावेश हुनेछ। क्वान्टम क्रिप्टोग्राफीको नेटवर्कलाई फाइबर वा स्याटेलाइटको माध्यमबाट देशभर फैलाएर पूरै सञ्जाललाई ह्याक प्रुफ गर्ने छ। प्रगति गर्न नसकेकाहरू थप, डाटा उल्लंघन को जोखिम रहनेछ ।’
अमेरिका र अन्य देशहरूले पनि यो प्रविधिमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। तर यो प्रविधिलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने र त्यसमा ठूलो परिमाणमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूसामु चुनौती छ ।
हाम्रो प्रश्नमा फर्केर आउँदैछ - देश किन क्वान्टम कम्प्युटर बनाउने दौडमा छरु यो सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अनुसन्धानको भविष्य हो। तर क्वान्टम संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी एटमको अनियमित व्यवहारका कारण यी अत्यन्त शक्तिशाली मेसिनहरू बनाउनु कठिन चुनौती हो।
धेरै देशहरू यो प्रविधिलाई जित्ने दौडमा छन्। जोनाथन भन्छन् कि यो दौड कहाँ गइरहेको छ कसैलाई थाहा छैन, तर यसले आफैंमा उत्साह पैदा गर्नेछ। बीबीसी
उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४८ करोड बजेट ३ मिनेट पहिले
आगामी आवको बजेट : उद्योग प्रवद्र्धन गरिने ५ मिनेट पहिले
प्रदेशमा जडीबुडी उद्योग सञ्चालन गर्ने ८ मिनेट पहिले